मुम्बईमा खारिएकी सभ्यता
छ वर्षअघि दोलखाबाट काठमाडौँ आउँदा सभ्यता गिरीलाई मोडलिङ र फिल्म क्षेत्रबारे कुनै जानकारी थिएन। एसएलसी पास गरेर क्याम्पस पढ्न काठमाडौँ आएकी उनी अहिले मोडलिङ र अभिनयमा व्यस्त छिन्। लज्जालु स्वभावकी सभ्यतालाई मोडलिङ र अभिनयमा औधि रुचि थियो।
तर, सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्ने कुनै ‘आइडिया’ थिएन। भन्छिन्, ‘गाउँबाट शहर पसेकी मलाई काठमाडौँ अत्यासलाग्दो शहर लागेको थियो। त्यसमा पनि मोडलिङ दुनियाँका बारेमा म अनभिज्ञ थिएँ।’
कलेज भर्ना गरेसँगै उनले आफूलाई रुचि लागेको क्षेत्र मोडलिङमा लाग्ने विचार गरिन्। ‘मोडलिङको प्रस्थान बिन्दु पहिल्याउन पनि मलाई गाह्रो परेको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘पत्रपत्रिकामा मोडलहरूको तस्बिर छापिएको देख्थेँ। तर, फोटो सुट कहाँ हुन्छ ? कसरी छापिन्छ ? केही थाहा थिएन।’
मोडलिङप्रति उनको रुचि देखेर उनलाई उनका आफन्तले फेसन फोटोग्राफर सञ्जय रौनियारसँग भेट गराइदिएका थिए। मुम्बई र काठमाडौँ दुवैतिर आलोपालो बसेर फेसन तथा ग्ल्यामर फोटो सुट गर्दै आएका फोटोग्राफर रौनियारले सभ्यताको फोटोजेनिक अनुहार हेर्नेबित्तिकै विभिन्न प्रडक्टको विज्ञापनका लागि सुहाउने अनुहार भन्दै फोटो सुट गर्न सुझाए।
छ वर्षअघि उनले पहिलो पटक रौनियारसँग पोर्टफोलियो फोटो सुट गराएकी थिइन्। विभिन्न पोज तथा ड्रेसमा प्रोफाइल फोटो सुट गरेपछि उनलाई मोडलिङ गर्न सकिन्छ कि भन्ने आँट आएको थियो। ‘म त्यतिबेला १७ वर्षकी थिएँ,’ सभ्यता सम्झन्छिन्, ‘फोटो सुटमा मैले जेजस्ता ‘एक्सप्रेसन’ दिएको थिएँ, त्यसबाट फोटोग्राफर रौनियार पनि प्रभावित हुनुभएको थियो।’
पहिलो पटक सुट गरिएको फोटोबाट उनले त्यतिबेला चलेका ब्रान्डको विज्ञापनमा काम गर्ने अवसर पनि पाइन्। दुई वर्ष काठमाडौँमा मोडलिङ गरेपछि उनी फोटोग्राफर रौनियारकै सल्लाहमा मुम्बई गइन्।
‘छोरी मान्छे एक्लै इन्डिया जाने, त्यसमा पनि मुम्बई भनेपछि घरमा आमाबाले निकै पिर मान्नुभएको थियो,’ उनी विगत याद गर्छिन्, ‘तर, मैले अभिनय र मोडलिङसम्बन्धी ज्ञान र सीप सिक्न जान लागेको भनेर उहाँहरूलाई सम्झाएँ।’ एक वर्ष काठमाडौँमा विज्ञापनमा अभिनय गरेर कमाएको केही पैसा लिएर उनी मुम्बई गएकी थिइन्।
काठमाडौँ शहर त पूरै भेउ नपाई मुम्बई पुगेकी सभ्यतालाई सुरुवाती दिनमा त्यहाँका गल्ली पहिल्याउन नै हम्मेहम्मे परेको थियो। प्रष्टसँग हिन्दी बोल्न पनि आउँदैनथ्यो। मुम्बई पुगेपछि सबैभन्दा पहिला किशोर÷नमित कपुरको एक्टिङ स्टुडियोमा उनले अभिनय क्लास ज्वाइन गरिन्।
‘आफूमा सीप र दक्षता नभईकन मुम्बई जस्तो ग्ल्यामर सिटीमा काम पाउन सकिँदैन भन्ने बुझेर नै सबैभन्दा पहिला म अध्ययन गर्नतिर लागेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘इन्डियाका नामुद कलाकारले समेत यो स्टुडियोमा अभिनयको कोर्स गर्थे। त्यहाँ कोर्स गरेपछि मुम्बईमा अभिनय नै गरेर पेट पाल्न सकिन्छ भन्ने आँट आयो।’
एक्टिङ कोर्स गरिसकेपछि सभ्यता विज्ञापन, सिरियल, नाटक तथा फिल्मका लागि हुने अडिसनमा सहभागी हुन थालिन्। एक मिनेट, ३० सेकेन्डका टेलिभिजन विज्ञापनका लागि सयौँ केटीहरू लाइनमा उभिएका हुन्थे। उनी पनि त्यही लाइनमा उभिएर पालो आएपछि अडिसन दिन्थिन्।
दर्जनौँ पटक अडिसन दिए पनि सफल हुन भने सकेकी थिइनन्। ‘अडिसनबाट छनोट नहुँदा कहिल्यै हार मानिनँ,’ उनी स्मरण गर्छिन्, ‘निरन्तर प्रयास गर्दा एक दिन कसो काम नपाइएला भनेर मेहनेत गर्दै गएँ। ग्ल्यामरको दुनियाँमा आफ्नो भविष्य चम्काउन मुम्बईमा हजारौँ युवती संघर्ष गरिरहेका हुन्छन्। त्यो भीडमा म पनि एउटा पात्र थिएँ।’
अडिसनका क्रममा आफ्नो हिन्दी भाषा कमजोर रहेको थाहा पाएपछि उनले हिन्दी भाषा सुर्धान हिन्दी पत्रिका तथा पुस्तकहरू पढ्न थालिन। अभिनयमा निखार ल्याउन थिएटर ज्वाइन गरिन्। ‘परिचय’ र ‘मदारी’ थिएटर ग्रुपमा रहेर उनले विभिन्न भाषाका ३० भन्दा बढी नाटकमा अभिनय गरेकी छिन्। सारी तथा कुर्ताको क्याटलग सुट, प्रिन्ट सुट, विज्ञापन आदिमा काम गरेर उनले मुम्बईमा आफूलाई सर्भाइभ गराएकी थिइन्।
दूरदर्शनबाट प्रसारण भएको ‘तुम बिन जिया जाये ना’ र कलर्सबाट प्रसारण भएको ‘सावित्री देवी कलेज एन्ड हस्पिटल’ टेलिसिरियलमा उनले अभिनय गरेकी छिन्। यसै गरी एपिसोडिक सिरियल ‘सावधान इन्डिया’, ‘सीआईडी’, ‘क्राइम पेट्रोल’ र ‘गुमराह’मा पनि उनले अभिनय गरेकी छिन्। केही हिन्दी तथा पञ्जाबी म्युजिक भिडियोमा समेत काम गरेकी सभ्यताले साउथ इन्डियन फिल्ममा लिड रोलमा अभिनय गरेकी छिन्।
‘मुम्बईमा अब काम नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सिरियल, विज्ञापन वा थिएटर जता पनि काम पाउने अवस्था छ।’
दशैँ मनाउन काठमाडौँ आएकी सभ्यता अहिले यतै छिन्। ‘फिल्म ‘यो माया कस्तो माया’ मा काम गर्ने अवसर आएकाले सुटिङका लागि यतै छु,’ उनी भन्छिन्, ‘स्क्रिप्ट मन परेर मैले यो फिल्ममार्फत डेब्यू गरेकी हुँ।’
फिल्मका केही दृश्य सुट गर्न बाँकी छ। त्यो सकेपछि मुम्बई नै जाने सभ्यताको योजना छ। मुम्बईमा केही नयाँ प्रोजेक्टका लागि कुरा भइरहेकाले जान लागेको उनी बताउँछिन्। राम्रो स्क्रिप्ट र टिम पाए नेपाली फिल्ममा काम गर्ने उनको इच्छा छ। भन्छिन्, ‘पाँच वर्ष मुम्बईमा सिकेको अभिनय कला नेपाली दर्शकलाई पनि देखाउन चाहन्छु।’